Ahoana ny fomba hiverenanao ny rohy mankany amin'ny tranonkalanao izay miasa ho an'ny SEO?
Ny rohy (ny fidirana), na ny rohy mankany amin'ny rindranasa, dia rohy loharano avy amin'ny loharano manondro ny tranokalanao na ny blôginao. Ary nahoana no tena zava-dehibe ny mahatakatra ny fomba hahazoana rohy mankany amin'ny tranokalanao? Satria ny rindran-damina dia hita eo anivon'ireo singa telo lehibe fototra ao Google, araka ny hafatra ofisialy navoakan'ireo manampahaizana ambony avy amin'ny vondrona mitady an'ity tontolo ity tamin'ny fiandohan'ity taona ity. Ankoatra ny hevi-dehiben'ny Search Engine Optimization, ny backlinks dia azo raisina ho toy ny vato azo itokisana - ny votoatinao dia manana valim-pinoana fantatra. Noho izany dia azo atokisana ny manampahefana ao amin'ny tranonkala na ny bilaogy. Amin'izany fomba izany, ny mili-pikarohana Google dia manamarina ny fanombanana PageRank - ny lanjan'ny pikantsary hita amin'ny pejy web ao amin'ny Internet. Ny fahatakarana ny maha-zava-dehibe ny fanorenana tranonkala voajanahary, eo ambany aho dia hampiseho aminao ny fomba hahazoana rohy mankany amin'ny tranokalanao na blôgy izay tena miasa ho an'ny SEO, amin'ny farany - hahitana anao any amin'ny toerana iray ao anatin'ny top-10 amin'ny valin'ny fikarohana Google.
Ahoana ny fomba hiverenana backlinks any amin'ny tranonkalanao ho an'ny tanjona SEO
Raha ny momba ny famoronana rohy momba ny fifandraisana SEO, ny zavatra rehetra momba ny backlinks dia zava-dehibe - manomboka amin'ny ireo sehatra tsirairay mifandray aminao sy ny mari-pahaizana manokana ananany, ny tombotsoan'ny rohy rehetra, ary koa ny fomba fandefasana azy eo amin'ny pejy. Ity ny fomba ahafahana miverin-dalana mankany amin'ny tranonkalanao ny lalana marina - ataovy azo antoka fa efa nahazo ny toerana rehetra ianao amin'ny fijerena ireto hevi-bala manaraka ireto:
miorina amin'ny fanondroana rohy izay manana rohy izay manondro anao dia angamba ireo fotodrafitrasa lehibe indrindra eo imason'i Google, raha toa ka tonga amin'ny fametrahana ny isam-pamokarana ankapobeny amin'ny rohy momba ny rohy.
Link Link manam-pahefana - na eo amin'ny isam-batan'olona (isaky ny pejy tsirairay miavaka), ary rehefa nalaina tamin'ny isa. Midika izany fa ny fananana lozam-boninkazo avo roa heny amin'ny fahefana lehibe dia ho tsara kokoa, fa tsy ny hiantsoana ny habetsahany ary tsy misy zavatra hafa.
Ny fahefana manara-maso dia tsy voatery midika fa izany rehetra izany dia ny tranonkalan'ny haino aman-jery maneran-tany na ny mpamokatra lehibe indrindra manerantany - ny vohikala orinasa tiany na ny bilaogy niche dia afaka mahazo fandrosoana tanteraka.
Ny valim-potoanan'ny fari-potoana dia azo raisina indraindray ho toy ny tena zava-dehibe, ny ampahany mandidy ny tompon'ilay tranonkala momba ny backlinks ho SEO. Mariho anefa, fa tsy voatery hanangana fifandraisana amin'ny loharanom-pahalalana efa antitra fotsiny ianao.
Ireo rakitra miavaka dia tsy sarobidy kokoa ho an'ny Google fotsiny, fa tsy ireo avy amin'ny toerana havanana izay tafiditra amin'io resaka io, na ny indostrian'ny orinasa. Raha ny marina, ny famerenana ny rindrankajy tsy misy dikany dia mety ho tenenin'ny motera fikarohana toy ny fihetsika manodinkodina na fandraisana an-tsitrapo - noho izany dia azonao atao ny mahazo anao ny sazy avo lenta (indraindray aza tsy misy vidiny).
Tsy tokony hohamaivanina mihitsy ny fahasamihafana eo amin'ny mombamomba azy. Aza misalasala ny manana rohy amin'ny tranonkala tsy manam-paharoa na bilaogy manana fahefana samihafa, fitokisana, PageRank, ary ireo toetra mifandraika hafa. Raha ny marina, izany no fanapahan-kevitra tsara indrindra entina - satria ny Google dia mikarakara be dia be amin'ny backlinks kolontsaina miaraka amin'ny soatoavina samihafa, mety ho ekeny ny fomba voajanaharin'izy ireo amin'ny famoronana Source .